SIDEE LAGUUGU DARAA MIDABO DHALAALAYA BEERTAADA? - WARARKA
Haddii aad u maleyneyso in aysan jirin midab ku filan beerta, ka dibna isku day in aad kala duwo naqshadeynta hadda, ha dib u dhigin sanadka soo socda.
Muujinaya fikrad yar, waxaad abuuri doontaa farshaxan farshaxan ah goobta, beerashada dhir dhalaalaya qaybahooda kala duwan.
Dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee dhirta ma aha oo kaliya mugdi ku ah jawiga goobta, laakiin sidoo kale buuxi wada noolaanshaha iyo raaxada.
Midabtakoorka saxda ah ee soo kordhay ma aha oo keliya in la fiiriyo meelaha qaarkood ee beerta, laakiin sidoo kale maaskaro qaladkiisa.
Adiga oo salvia casaan ah ku yaal meel gaar ah, waxaad u jeedin kartaa dareenka muuqaalka ah ee ka yimaada aagga hore.
Si loo hirgeliyo qorshaha waxaad u baahan doontaa dhir dabacsan oo sanadle ah. Ubaxyadaasi waxay u koraan si dhakhso ah waxayna ku farxaan isha martida kahor inta aaney bilaabmin cimilada qaboobaha ee ugu horreysa. Iyadoo caawimaadda dhirta sida, waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan ee naqshada beerta xitaa sanad kasta.
Qurxinta quruxda badan ee beertaada - sanadlaha
Cosmea. Warshadani waxay noqon doontaa quruxda quruxda badan ee beertaada ee qeybta labaad ee xagaaga. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo qaybaha jilicsan ee beerta. Dhererka ah ee asliga ah ee warshad waxay noqon kartaa ilaa 120 cm.
Zinnia Bannaanka u jecel yahay dulqaad si heerkul aad u sarreeya iyo midabyo badan, midabo badan. Waxaa jiri kara midabyo, marka laga reebo midabada buluugga. Haysashada dhererka kala duwan. Dhinaca muuqaalku wuxuu u egyahay muuqaal qurux badan oo dhererkiisu ka dheeraan yahay 90 cm Ciriiri ka mid ah qorshaha ayaa lagu qurxin doonaa dhirta leh dherer dhererkeedu yahay ilaa 20 cm.
Balsam u qurxin dhinacyada beerta. Qaybta waqooyi ee daaqada ka baxsan waxay u beddelaysaa dhirta iftiinka ah iyo ubaxyada dhaadheer.
Petunias. Ubaxyada caanka ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo dheriga iyo sariiraha ubaxa. Iyadoo ay caawinayaan, waxaad abuuri kartaa xalal muuqaal ah oo muuqaal ah. Warshadu waa mid aan qabyo ahayn oo daryeel leh oo leh dulqaad wanaagsan.
Kalluunka. Waxay ku farxi kartaa isha iyada oo leh ubaxyo huruud ah oo dhalaalaya illaa iyo hargabka ugu horeeya. Ubax wuxuu u dulqaadanayaa kuleylka, waa u-dulqaad iyo ujeedkiisu inuu ku koro dhinaca qorraxdu.
Sannadlaha waxaad ka heli kartaa ubaxyada midabada ugu caansan. Dhar kasta oo qaansoroobka ah wuxuu ku dhex socon karaa beertaada. Casiir leh, taajir ah ama jilicsan, midab daaqado ah?
Ama waxaa laga yaabaa inaad tahay taageere midabyo qalaad leh? Waxaa ka mid ah dhirta sanadlaha ah, waxaad ka heli kartaa xaalado si buuxda u daboolaya niyaddaada.
Ubaxyo badan oo lagu qurxiyo beertaada
Geraniums beerta. Warshadu waxay u egtahay muuqaalka baadiyaha iswada leh leh caleemo furan oo qurux badan iyo ubaxyo dhalaalaya. Waxay noqon kartaa midabyo iyo qaabab kala duwan.
Coleus. Si ka duwan dhirta kale kama faani karaan quruxda gaarka ah ee ubaxa. Tilmaamyadu waa cufan, caleemo aan caadi aheyn.
Sedge. Warshadani waxay noqotey mid aad u caan ah xalal naqshado kala duwan marka la samaynayo qorshe beerta. Kala duwanaanta midabeynta asalka ah ama inflorescences ee qaab aan caadi ahayn. Waxay u egtahay maskaxda dhirta qaarkood, tusaale ahaan, maqnaanshaha qayb ka mid ah caleenta ama, si tartiib tartiib ah, waxay faa'iido u tahay in la gooyo dhirta ubaxyada.
Angelonia. Warshad qurux badan oo qurux badan oo nooga timid Mexico. Waxay u dulqaadaneysaa cimilada kulul.
Geedkan qurux badani kuma dhicin karo inuu soo jiito indhaha. Kala duwanaanta midabyada kala duwan waxay u adeegi karaan saldhigga qurxinta beerta aan caadiga ahayn.
Sawirrada beeraha meesha aad dhigan karto ubaxyo dhalaalaya
Veranda ama patio. Goobahaas waxaa lagu qurxin karaa ubaxyo dhalaalaya leh caleemo aan caadi ahayn. Qaababka noocan oo kale ah ayaa ku siin doona raaxo iyo diirimaad goobta.
Buuxi meelaha bannaan. Waxaa suurtogal ah in lagu beero ubaxyo dhakhso ah oo sii kordhaya on goobo madhan, inay qurxiyaan derbi madhan ama geeska qaarkood.
Si aad u qariso indhahaaga indhaha, waxaad dhali kartaa geedo dheer ama dhirta kuleylka ah. Waxay abuuri doonaan ilaalin xilliyeed ka yimaada galmada aan loo baahnayn ee noloshaada gaarka ah.
U qurxin galka albaabka. Dhirta iftiinka iyo midabada leh waxay abuuri doontaa jawi xafladeed iyo niyadda wanaagsan haddii aad u dhejiso meel u dhow albaabka.
Waa in aanad xadidan duulimaadkaaga maskaxdaada oo kaliya markaad beerto geedo qurxoon. Aqalado kala duwan, sariiro ubax ama xitaa barkad-yar ayaa noqon doona mawduuc aad u xiiso u leh deriskaaga. Nooga ubaxa sida ku qoran qaabka qaarkood ama qurxin qaybo ka mid ah beerta. Qalabaynta naftaada gaarka ah, naqshadeynta aan caadiga ahayn ee dhulka xuduudda leh iyo sawirkaagu wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u xiisaha dadka kale.